Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo dib u qaabayn ku sameeyay Guddiga Maaliyadda Golaha – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo dib u qaabayn ku sameeyay Guddiga Maaliyadda Golaha
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa Guddoonka Goluhu ku go’aamiyeen in dib-u-habeyn lagu sameeyo Guddiga Maaliyadda oo uu ka dhex taagnaa Khilaafka aaddan u xooggan.
Waxaa guddiga lagu soo daray xubno cusub oo ku jiray guddiyo kale, iyadoo laga saaray Guddoomiyihii hore ee Guddiga Maaliyadda Cali Caliyow, Guddoomiye ku xigeenka Maxamed Soomaali iyo xoghayihii guddiga C/llaahi Maxamed Nuur.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo xubin ka ah Guddiga Maaliyadda ayaa kalfadhi usheegay in ay soo dhawaynayaan go’ aanka guddoonka “waxaan soo dhawaynaynaa Go’aanka Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya dhawaan ayaana soo dooran doonnaa Gudoomiyaha cusub ee Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka” ayuu kalfadhi ku yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi.
Warkan qoraalka ah ayaa Guddiga lagu faray in Miisaaniyadda 2019 la horkeeno Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya 30/12/2018 si loo meel mariyo.
Halkaan ka aqriso warka qoraalka guddoonka.
Haddii uusan Baarlamaanku ansixin Miisaaniyadda 2019-ka maxaa dhacaya?